Tsy fahampian’ny rotsak’orana : Nihena ny voka-bary any amin’ny tapany Atsimon’ny Nosy -
AccueilSosialyTsy fahampian’ny rotsak’orana : Nihena ny voka-bary any amin’ny tapany Atsimon’ny Nosy
Tsy fahampian’ny rotsak’orana : Nihena ny voka-bary any amin’ny tapany Atsimon’ny Nosy
13/06/2018 admintriatra Sosialy 0
Ahiana ny hisian’ny tsy fanjariantsakafo amin’ny kaomina maro any amin’ny tapany Atsimon’ny Nosy iny noho ny fihenan’ny voka-bary izay ateraky ny tsy fahampian’ny rotsak’orana. Nisongadina izany, nandritra ny fivorian’ny teknisiana avy amin’ny fahasalamana, avy amin’ny ofisim-pirenena momba ny fanjariantsakafo (ONN) ary avy amin’ny birao nasionaly mitantana ny loza voajanahary na ny Bngrc izay notontosaina tany Toliara, nandritra ny herinandro. Fivoriana nanaovana ny tombana ny fanadihadiana notanterahana tany amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany, Androy, Anosy, Atsimo Atsinanana ary Atsimo Andrefana hiatrehana ny maitso ahitra sy hisorohana ihany koa ny tsy fanjariantsakafo mety aterak’izay fihenan’ny voka-bary izay.
“Nihena ny ankamaroany vokatra aty amin’ny tapan’ny Atsimo, izany faritra Bekily izany no isan’ny mpamoka-bary taloha, izay mamatsy hatrany Androy, Soanala, Tsihombe sy ny maro hafa nefa izao nihena be ny vokatra avy any an-toerana. Raha atao bango tokana dia tsy ampy ny vokatra aty amin’ity taona ity. Ka msahatsara ity fanadihadiana ity dia izy tonga mametraka hoe, aiza ny faritra mena, firy isan-jaton’ny olona tratran’ny tsy fahampian-tsakafo mba hanaovana asa maika. Ary fantariny sahady ny eo anelanelan’izao famokarana izao sy ny hahatongavana amin’ny vanim-potoana maitso ahitra ka tsy maintsy misy asa atao eo anelanelan’io”, hoy ny fanazavan’ny Sekretera mpanantanteraka lefitra eo anivon’ny Bngrc, ny jeneraly Rambolarison Charles.
Marihina moa fa tafiditra ao anatin’ny fivoriana fanaon’ny Bngrc indroa isan-taona izao fivoriana izao, ny voalohany izay hatao amin’ny fotoana sarotra na maitso ahitra, ary ny faharoa izay hatao mandritra ny fotoana fiakaran’ny vokatra toa izao, araka ny fanamarihana ny Sekretera mpanatanteraka lefitra eo anivon’ity Bngrc ity hatrany. Fantatra moa fa aparitaka manerana ny Nosy sy maneran-tany ny antontan-kevitra nivoaka taorian’izao tombana izao, entina hamaritana ny asa hatao hisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo sy hiatrehana ny maitso ahitra.
Hisy indray ny hetsika hotanterahin’ireo mpanao politika any Soamahamanina ny alatsinainy izao. Noho ny fanafarana mpanao gazety avy any ivelany no antony hanatanterahana ny hetsika raha ny nambaran’ireo mpikarakara. Mpanao gazety tsy fantatra hoe iza ...Tohiny